.. မရောက်ဖြစ်တာ ကြာပြီ ...
ကျနော် ဒီ ဘလော့ကို ပြစ်ထားမိတာ ကြာပြီ..
ဒီ နှစ် တစ်ခြမ်းလုံး ကျနော် အလုပ်တွေ အရမ်း ရှုပ်နေခဲ့မိတယ် ..
ပညာရေး၊ စီးပွားရေး... လူမှုရေး... အချစ်ရေး ... အရာရာနဲ .. ရှုပ် နေမိခဲ့တယ် ..
ကျနော် တစ်ခုခု ပြန်ရေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် .ဗျာ... အနည်းဆုံး တစ်ပတ်ကို ၄ ပုဒ်လောက်တော့ ရေးဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် ...
အချိန် 10:37 PM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
နေညမပျက်မင်းကိုလွမ်းစွံ့ မူ့ 
အချိန် 1:56 PM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
အချိန် 1:46 PM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
အချိန် 2:34 PM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
NoD 32 New Keys
NODN 32 KEY အသစ် 4-19-10
အချိန် 3:52 PM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
ဗိုင်းရပ် ကီး အသစ် ၄-၁၃-၂၀၁၀
ကျနော် ကီးအသစ် ကို တစ်ပတ်တစ်ခါ တင်ပေးပါ့မယ်။
ကီးရိုက်တင်တာ Google ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တတ်နိုင်သမျှ အင်္ဂလိပ်လိုမပါအောင် ဂရုစိုက်ထားပါတယ်
အချိန် 9:00 PM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
Mozilla Firefox 3.5.8 Pre Portable | 21,3MB
သူများကွန်ပြုတာမှာ သုံးမယ် ဆို ရင်
ကျောင်းတွေ အလုပ်တွေ မှာ သုံးမယ်ဆို
install လုပ်စရာမလိုဘဲ ဒေါင်းလို့ ရပါတယ်.
Mozilla Firefox - the browser is very fast, and speed of apparent not only during loading web pages,
but when looking at bookmarks and history. Made it through the engine, and Mozilla allows you to
view all Web pages in one window mnogovkladochnom, but also has many other useful options, including
the ability to significantly enhance connectivity plug-ins (and released themagreat many).
"Support the tabs (English tabbed browsing) (a few pages in one window)
"So-called" Live Bookmarks "(born Live bookmarks) - the mechanism of integration of RSS-streams
"The mapping of content at once (makes it comfortable to continue surfing even with incomplete page
အချိန် 8:12 PM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
ဒီ converter လေးလည်း သုံးလို့ ကောင်းပါတယ် ။
Media Convert Master v8.4.1.200 |45MB
အချိန် 7:46 PM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
အခုတစ်လော http://messengerforbuddhist.blogspot.com/ တဲ့ဘလော့က နာမည်အရမ်းကြီးနေပါတယ်။ Fwd မေးတွေလဲ ခဏခဏရောက်လာပါတယ်။ဒီဘလော့ကို ဝိုင်းဖျက်ပေးဖို့ ပြောနေကြာတာ ကြားရတယ်။ လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့် ကရောဘယ်လို ဆိုတာ ..... ။ ဒီလိုဘလော့တွေ ကိုဖတ်မိရင် အသိညဏ် နုတဲ့လူတွေကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်...
ဒီတော့လည်း ဖျက်မယ် ဆိုရင် http://anti786.blogspot.com ကိုပါ ဖျက်သင့်ပါတယ်........ မျှမျှတတ ဖြစ်သွားတာပေါ့............................ ဒီလိုစော်ကားမော်ကားရေးတာ က တော့ မသင့်တော်တာ အမှန်ပါဘဲ
အချိန် 5:32 PM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
USAဖတ်စာထဲ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အမေရိကန် အထက်တန်းကျောင်းအများစု ရဲ့ ဖတ်စာအုပ်အဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ Mcdougal Littell ထုတ်တဲ့ ၂၀၁၀ Modern World History ရဲ့ မျက်နှာဖုံးမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပုံ ပါတာကိုထူးခြားစွာတွေ့ ရပါတယ်။ ကျနော် ယူထားတဲ့ World History Class ရဲ့ ဖတ်စာအုပ်မှာ တွေ့ လိုက်ရလို့ အံသြမိပါသေးတယ်။ ဘာဘဲပြောပြော ဂုဏ်ယူစရာပါဘဲ ။ မြန်မာတစ်ယောက်အနေ နဲ့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
အချိန် 9:34 PM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
အင်တာနက် ကနေ ဘောလုံးပွဲကြည့်မယ်
ကျနော် ကို Online ကနေ ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ဖို့ မေးကြတဲ့လူတွေ အများကြီးပါ။ ကျနော် လည်းပြောပြပါတယ် သေသေချာချာ မလုပ်တတ်ကြတော့ နောက်ဆုံး Teamviewer နဲ့ ပါ ပြန်လုပ်ပေးရတယ်။ ကျနော်လည်း မအားတော့ ပြန်မပြောပြပေးနိင်တဲ့လူတွေ ကို အရမ်းကို အားနာလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ post လေးကိုတင်လိုက်တာပါ။
ဘောလုံးပွဲ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးအနေ နဲ့www.myp2p.eu ကို သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာ Software ဆိုတော့ Tag လေးရှိပါတယ်။ အဲဒီကနေ Sopcast ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲနဲ့TVU ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲ ကိုပါယူရပါမယ်။
ဆော့ဝဲတွေ ကို ဒေါင်းလော့ လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ အင်စတော့ လုပ်ပါ။ အားလုံးပြီးရင်တော့.. live sport ဆိုတဲ့ tag ကနေ Football ဆိုတဲ့ tag အောက်ကိုသွားလိုက်ပါ။
ဒီဆိုရင်တော့ ကြည့်လို့ ရပါပြီ။ တကယ်လို့ ကြည့်မယ် ဆိုရင် Sopcast က အဆင်အပြေဆုံးပါ။ အထူးသဖြင့် YES TV နဲ့SOCCER FOX ပါ ။ အဆင်မပြေတာများရှိ်ရင်တော့ .... C box ကနေ မှာထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။
အချိန် 9:59 PM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
Equal Share လား?
ကျောင်းတွေမပိတ်သေးတဲ့ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့ ကပေါ့ ။ကျောင်းမှာ ကျနော် debate တစ်ခုကို အသည်းအသန် ဆင်နွဲလိုက်ရတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ အများပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဆုံးမှာကြေနပ်ပျော်ရွှင်စွာ ကျနော် အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ကျနော် ရဲ့လုပ်ရပ်အတွက် ကျနော် ဂုဏ်ယူမိသလိုပါဘဲ။ ကျနော် တကယ်ကို ကြေနပ် မိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့Greeley West High School မှာ နိုင်ငံတကာကျောင်းသား အတော်လေးကို တတ်ကြတယ်လေ။ အဲဒါကျောင်းက နိုင်ငံသားအသစ်တိုင်း သူ့ နိုင်ငံရဲ့အလံကို ကျောင်းအဝင် မိန်း လမ်းရဲ့ မျက်နှာကျက်မှာ တပ်ပေးတဲ့အစဉ်အလာရှိတယ်လေ။ အဲဒါကြောင့်ကျောင်းအုပ်နဲ့တခြားဆရာ ဆရာမ တွေက နိုင်ငံတကာက ကျောင်းသားတွေကို ခေါ်တွေ့ ကြပါလေရော။ အဲဒါနဲ့ နိုင်ငံတကာက ကျောင်းသားတွေကို သူ တို့ နိုင်ငံအလံနဲ့ သူ တို့ နာမည်ရေးပေးမယ့် အကြောင်း ပြောပြပြီး အလံတွေကိုပြ ပါရော။
အဲဒါနဲ့ ကျနော် တို့ မြန်မာပြည်သားတွေကို မြန်မာအလံတင်ပေးမယ့် အကြောင်း ပြောပြတယ်လေ။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်က ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြော ပြီပြန်ထွက်မလို့ အဲမှာ ကရင်တွေက မြန်မာအလံတင်တာကို ကန့် ကွက်ကြောင်း သူတို့ မှာ ကိုယ်ပိုင်အလံရှိကြောင်းပြောကြတယ်။ တစ်ချို့ ထိုင်းမှာမွေးတဲ့ ကရင်တစ်ချို့ က သူတို့ထိုင်းကလာတာဖြစ်ကြောင်းဝိုင်းပြောကြတယ်လေ ။ဒီတော့သိတဲ့အတိုင်းဘဲ ပွဲဆူသွားတာပေါ့။ ကျနော် လည်း အံသြသွားတာပေါ့။ ဘာလုပ်တာဘာလဲဆိုပြီး ။
အဲဒါနဲ့ ကျနော်က ကျောင်းအုပ်ကြီးကို ကရင်အလံ တင်တာကို ကန့် ကွက်ကြောင်းထပြောတာပေါ့။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့လူအတွက် ထိုင်းအလံတင်တာကို လက်ခံကြောင်း ပြောလိုက်တယ်၊ အဲဒါနဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်ကမေးတယ် “ဘာကြောင့်လဲ” တဲ့ ဘာကြောင့် သဘောမတူနိုင်သလဲဆိုတာ ကို ပြောပါဦးတဲ့။ အဲဒါကို အခြားဆရာမတစ်ယောက် Debate လုပ်မလားတဲ့ ကျနော်က အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တယ် ။
ကျနော် ကတစ်ယောက်ထဲ သူတို့ က ၉ ယောက်ဆိုတော့ ဖြစ်ပေါ့မလားလို့ တွေးနေတုန်း ကျနော် တို့ တိုင်းပြည်အကြောင်းကျနော် ပြောပြလို့ သေသေချာချာ သိတဲ့ ကျနော့် သူငယ်ချင်း နာဒီယာဆိုတဲ့ ယီမင် က ကောင်လေးက လုပ်ဖို့ အတင်းတိုက်တွန်းတယ်။ သူလည်း ဝိုင်းပြောမယ် တဲ့ ။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်း လုပ်မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ် ။ လူတွေက အတော်လေးများတယ် ဆိုတော့ စကားပြောဖို့ ကျနော် ကြောက်မိတာ အမှန်ဘဲ ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့် အရမ်းကို ပြောချင်နေမိပြီ။
ဒါနဲ့ ကျနော် ကပြောပြတယ်ပေါ့ ကရင်ဆိုတာ ကျနော် နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးပါပေါ့။ နောက်ပြီး လူနည်းစုဖြစ်တဲ့အကြောင်း အင်္ဂလိပ် ခေတ်မတိုင်ခင်မှာ အေးအေးချမ်းချမ်း တောထဲမှာသာနေကြကြောင်း ၊ နောက်ပိုင်မှ နယ်ချဲ့သွေးခွဲမှုကြောင့် အများစုဖြစ်တဲ့ ဗမာလူမျိုးတွေနဲ့ ပြသနာ ဖြစ်ကြကြောင်း၊ သူတို့ ကပြောတယ် သူတို့ က ပြောတယ် သူတို့ တိုင်းပြည်ကို မြန်မာတွေ သိမ်းပိုက်ထားကြောင်း စစ်သားတွေက မတရားနိုပ်စက်ကြောင်း၊ ဒါနဲ့ ကျနော် အလှည့်ရောက်တော့ ကျနော်က
သူတို့ တိုင်းပြည်ဆိုတာ မရှိကြောင်း ၊ ပြည်နည်တစ်ခု အဖြစ် မြန်မာ အစိုးရ က သတ်မှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ဝီကီဒီးပီးယား တို့ သမိုင်စာအုပ်တွေမှာသေခြာကြည့်နိုင်ကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ နောက်ပြီး အလံကိစ္စမှာ ကရင် အလံမတင်သင့်ကြောင်း ဥပမာ - ဟန်တရုတ်ဖြစ်ဖြစ် မန်ချူးဖြစ်ဖြစ် ကူမင်တန်ဖြစ်ဖြစ် တရုတ်သာဖြစ်ကြောင်း၊ အမေရိကန်မှာလည်း အာရှက ဖြစ်ဖြစ် ၊ မက္ကစီကန် ဖြစ်ဖြစ် ၊ အင်ဒီယန်ဖြစ်ဖြစ် ဒီမှာမွေးဒီမှာကြီးလျှင် အမေရိကန်လို့ သာခေါ်ကြောင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက် တရုတ်ပြည်မှာကျောင်းသွားတတ်လို့သူနိုင်ငံ အလံတင်ဖို့ ကိစ္စပေါ်လာရင်လည်း အားလုံးက အမေရိကန်အလံတင်မှသာဘဲ လက်ခံမှာဖြစ်ကြောင်း တကယ်လို့သူ က နယူးယောက်သားဖြစ်လို့ နယူးယောက်အလံတင် ချင်တာတို့ ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်မှာ မွေးလို့ ကော်လိုရာဒို အလံတင်ချင်တာကို ဘယ်သူမှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်း ကျနော် ပြောလိုက်ပါတဲ့အခါ သူတို့ ဘာမှဆက်မပြောနိုင်အောင် ကျနော် အသာဆီး ရလိုက်ပြီးဆိုတာ ကျနော် သိလိုက်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဆရာ၊ဆရာမတွေလည်း လက်ခံပြီး ကရင်အလံမတင်ဖို့ သဘောတူလိုက်ကြပါတယ်။ ကျနော်လည်းတကယ်တော့ ကိုယ်မြန်မာပြည်သားအချင်းချင်း ပြသနာမတတ်ချင်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာက ဗမာလူမျိုးကျောင်းသားဆိုလို့ ကျနော် တစ်ယောက်ဘဲရှိတယ်လေ။ သူတို့ ကအများစုပေါ့။ ကျနော်တို့ ကျောင်းမှာ သူတို့ က အခြားလူဘယ်သူနဲ့ မှာ အပေါင်းအသင်းမလုပ်ကြဘူး။ ကျနော်ကိုလည်း တော်တော်များများက မခေါ်မပြောကြဘူး ။ဗမာဖြစ်လို့ တဲ့ ။ဒီလိုခေတ်ကြီးမှာ ဒီလိုအတွေးအခေါ်တွေ ဒီလိုအမြင်တွေ ရှိနေတာကို လည်း ကျနော် နားမလည်နိုင်လောက်အောင်ပါဘဲ။ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျနော်တို့ ဘယ်လို ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်ကြမှာလည်း၊ နောက်ပြီး ကျနော် တို့ ရဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ဟာ အခုလိုဘဲသူများ အောက်ကျနောက်ကျ ဘဝမှာဘဲရှိနေတော့မှာလားလို့ ။
တစ်ခါတစ်လေလည်းတွေးမိတယ် ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကို အခုအချိန်များရော့ ဒီမိုကရေစီဆိုပြီး ပေးလိုက်ရင်တော့ မတွေးရဲစရာဘဲ။ လူမျိုးပေါင်း ၁၃၅ မျိုးကျော်ရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာ လိုချင်နေကြတဲ့ ခွဲထွက်ခွင့်တွေအတွက် တော့…….။ ဘာလို့ များဒီလိုလိုချင်နေကြပါလိမ့်။ နောက်ပြီး ကရင်တစ်ကျပ် ဗမာတစ်ကျပ်ဆိုတာ ကို စဉ်းစားမိတယ်။ ဥပမာ - ဘတ်ဂျပ်တစ်ခု အတွက်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ဆိုပါတော့ ၅ ယောက်ရှိတဲ့ ကရင်လူမျိုးအတွက် သန်း ၅၀ ၊ ကျန်တဲ့ ဗမာ ၉၅ ယောက်အတွက် သန်း ၅၀ ဆိုရင်တော့ … တော်တော်လေးကို မျှတမှာဘဲလို့ ……….
အချိန် 4:27 AM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
နော့်ဘလော့ကိုhttp://anyataya.co.cc// ဖြစ်ကြည့်နိုင်ရန် လိပ်စာအသစ်ရယူထားပါတယ်၊www.thetkoko.co.cc မှာ မကြာမှီသက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန် 4:21 AM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
"လောကကြီးမှာ လွယ်ကူတဲ့အလုပ်ရယ်လို့မှမရှိဘဲ။ အားလုံးခတ်တာချည်းဘဲ။လူ့ ဘဝဆိုတာလည်းဒီအတိုင်းကြီးဘဲမဟုတ်လား။ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော်တယ်တတ်တယ် အထင်ခံရရုံ သက်သက်အတွက် ကျနော်တို့ မှာရှိတဲ့ စွမ်းအားတွေ အရည်အတွေးတွေအားလုံး သူများကိုဖြိုဖျက်တိုက်ခိုက်မဲ့နေရာမှာပုံအောမဲ့ အစား ၊တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အကောင်းဆုံးအနေအထားရောက်အောင် မြင့်တင်ပေးတဲ့ အလုပ် အားပေးကူညီတဲ့အလုပ်ဘက်မှာသုံးရင် ပိုမကောင်းဘူးလား"
ဒီစကားကို ဆရာဖေမြင့်ရဲ့“ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသေချာပြီလား” စာအုပ်ထဲမှာဖတ်လိုက်ရတာပါ။ ဟုတ်ပါတယ် အဲဒီစကားအတိုင်းပါဘဲ ကျနော်တို့ အားလုံးအကောင်မြင်ဝါဒ နဲ့ အားပေးကူညီတည်ဆောက်တဲ့ ဘက်မှာ တတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကို ပိုသုံးစွဲသင့်ပါတယ်။အခုလပိုင်းတွေမှာကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးဟာ အကောင်းဖက်ကို ဦးတည်နေတယ်လို့ ကျနော် ယူဆပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ ထာဝရရန်သူ ထာဝရမိတ်ဆွေဆိုတာမရှိပါဘူး ထာဝရအကျိုးစီးပွာဘဲ ရှိတယ် လို့ တရုတ်ပညာရှိ စွန်စူးက ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ကျနော် လည်းဒီလိုဘဲယူဆပါတယ်။ မြန်မာ အတိုက်အခံတွေဟာ မကောင်းမြင်တဲ့ဖက်မှာပိုပြီး အလေးသာပါတယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ် ။အများစုပါ။ တကယ်တော့ မကောင်းမြင်တဲ့ဝါဒ ဟာ မကောင်းတဲ့ဖက်ကိုဘဲ ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ နအဖ ဘာလုပ်လုပ်မကောင်းဘူး မကြိုက်ဘူး မရဘူး မသင့်ဘူး စတဲ့ ဘူးပေါင်းမှားစွာနဲ့နေနေတာဟာတကယ်တော့မကောင်းလှပါဘူး။
သူတို့ ကောင်းတာနည်းနည်းလုပ်ရင် ကောင်းပါတယ် မှန်ပါတယ်လို့ ပြောခြင်းအားဖြင့် ကောင်တာ ဆက်လုပ် ချင်တဲ့စိတ်ကိုတွန်းအားပေးရာကြပါတယ်။ ခလေးတွေလိုပေါ့ ကကြီး ခကွေး ရေးတဲ့ အခါ လှလိုက်တာ တော်လိုက်တာလို့ ပြောခြင်းအားဖြင့် ဆက်ရေးခြင်စိတ်ကိုတွန်းအားပေးရာေ၇ာက်ပါတယ်။ သူရေးထားတာကို မင်းရေးထားတာမလှဘူး မကောင်းဘူး မင်ကသောက်သုံးမကြဘူးလို့ ပြောလိုက်ရင် ဘယ်ခလေးမှဆက်ရေး ခြင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်ပြောချင်တာက လူမိုက်အားပေးလုပ် ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းတာလေးတွေကို တော့တကယ်ကိုအကောင်းမြင်သင့်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည့်ရဲ့အလားအလာကို ကျနော်တို့ ဘဲဖန်တီးရမှာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့NLD ရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော့် အထင်ပါ။အမေရိကန်ရဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ မှုတွေ ပြန်ပွင့်လာမှာပါ။ အမှောင်ပြီးရင် အလင်းလာမှာပါ။ကျနော်တို့ အမှောင်ထဲမှာနေရတာ ကြာလှပါပြီး။ ကျနော်တို့ အားလုံး ညီညီညာညာနဲ့ အတူတူတည်ဆောက်ကြရင် အားလုံးအတွက်ပိုကောင်းမှာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တစ်နေရာမှာ ပြည်ထောင်စုနဲ့ အခမ်းအနားလုပ်ဖို့ စီစဉ်ကြတယ်။ အဲမှာလူတစ်ယောက် (ဗမာတစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ) က အဲဒီအခမ်းအနားမှာ စည်းလုံးခြင်းအတွက် သီချင်းတစ်ပုဒ် ဆိုတဲ့သီချင်းကိုဖွင့် သင့်တယ်လို့ အကြံပေးတာကို တိုင်းရင်းသားတချို့ (အများစု)ကငြင်းပယ်ကြတယ်။နအဖ ကထုတ်ထားတဲသီချင်း တဲ့ ပေါ်လစီ သီချင်းမို့မဖွင့်နိုင်ဘူးတဲ့။ ကျနော်တော်တော် ခံပြင်းသွားမိတယ်။သီချင်းရဲ့စာသားကို နားထောင်ကြည့်ပါ ဘာအမှားတစ်ခုမှမပါဘူး။တိုင်းရင်းသားအားလုံးစည်းရုံး စရာကောင်းအောင် ရေးထားတာဘဲရှိပါတယ်။ တစ်ကယ်ကို စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ကျနော်တို့ ဗမာလူငယ်တွေ ဘယ်တိုင်းရင်သားကိုမှာမုန်းတီးတဲ့စိတ်မရှိပါဘူးဆိုတာ ကျနော် သေသေချာချာသိပါတယ်။ ကျနော်ရန်ကုန်မှာကြီးခဲ့ တာပါဗျာ။ တိုင်းရင်းသားအများစုကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး ။ကျနော်တို့ ဗမာလိုမျိုးတွေကို မုန်းကြတယ်ဗျာ။ကျနော်တို့ သူတို့ အားကောင်းတဲ့နေရာရောက်တော့ အနိုင်ကျင့်ချင်သလိုလို ဘာလိုလိုလုပ် ကြတယ်ဗျာ။ သူတို့ ရဲ့အကြီးအကဲတွေ က သူတို့ ကို မုန်းတီးတဲစိတ်တွေထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ ထင်ရတယ်။ တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပါဘဲ။ကိုဇော်ဝင်းထွဋ် ရဲ့ စည်းလုံးခြင်းရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်လို ကျနော်တို့ အားလုံး အတူတစ်ကွ ချစ်ချစ်ကြည်ကြည်နေကြရရင် အတိုင်းထက်အလွန်ပါဘဲ။
နားထောင်ကြည့်ပါဗျာ။ အနာဂတ်မှာ အတူတူပျော်ကြရအောင်။
အချိန် 2:53 AM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
ဂျောက်ဂျက် Vs ကျော်ထွဋ်ဆွေ Album အသစ်
JOUK JACK Vs KH$ ဆိုပြီး မြန်မာပြည်ဟစ်ဟော့လောကရဲ့ အကောင်းဆုံးအဆိုတော်လို့ လူငယ်တွေ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ ဂျောက်ဂျက်နဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေတို့ ရဲ့ simple album အသစ်ထွက်ရှိလာပါတယ် ရ ပုဒ်ပါပြီး တစ်ပုဒ် က အဟောင်းကို စာသားနည်းနည်းလေးပြောင်ထားပါတယ်။ ထူးခြားတာက ရိုင်းတဲ့စာသား မပါသလောက်ပါဘဲ။ ဘာဘဲပြောပြော စာသားတွေက အရမ်းအရမ်းပြောင်မြောက်ပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့သီချင်းတွေအပေါ် စာသားရိုင်းလို့ ဝေဖန်ကြပေမယ့် လူငယ်အများစုက လက်ခံကြပါတယ်။ကျနော် လည်းလက်ခံပါတယ် ။စာသားတွေအရမ်းပြောင်မြောက်တယ် ဆိုတာက်ိုလေ။ အထူးသဖြင့်ကျော်ထွဋ်ဆွေရဲ့ အချစ်သီချင်းအေးအေးလေးတွေကိုပေါ့။ အရင်က ကြိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ရဲ့စာသားတွေနဲ့ ဆိုဆီနဲ့ ရေလိုပါဘဲ။လူကြီးတွေ နားထဲမှာတော့ ကန့်လန့် ကြီးဖြစ်မှာမလွဲပါဘူး။မြန်မာ hip hop လောက ရဲ့တိုးတတ်မှုတွေထဲ က တစ်ခုပါဘဲ။
အကြိုက်တူတယ် ခံစားချင်တယ် ဆိုရင်တော့
အချိန် 12:15 AM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
Font အသစ်ပေါ်တယ်လို့ planet မှာဖတ်လိုက်ရလို့ စမ်းသုံးကြည့်ပါတယ်။ စာရိုက်တာနဲ့ တင် တိုင်က ပတ်နေတယ်။ ကျနော်ဘဲ မရိုက်တတ်လို့ လားဘာလို့ လဲ တော့မသိဘူး ဇော်ဂျီလောက်ဘယ်ဟာ မှာသုံးရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။ တစ်ကယ်ဆို ရင် font တွေ အများကြီးပေါ်လာတာ ကောင်းပေးမယ့် အခြေခံ လက်ကွက်မတူ ဘူးဆိုလျှင် မြို့ ပတ်ရထားမှာလိုက်ရောင်းတဲ့၃ အုပ်တစ်ရာတန် ဖတ်သူမရှိတဲ့စာအုပ်လို ဘဲ ဖြစ်နေမှာပါ ။လက်ရှိမှာတော့ ၉၅ % လောက်က ဇော်ဂျီမှ ဇော်ဂျီပါဘဲ ။မြန်မာဘလော့တွေ လွယ်လွယ်ကူကူ ရှိနေရခြင်းဟာ ဇော်ဂျီကြောင့်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး။ အလွယ်တကူ စာရိုက်လို့သင်ရင်တတ်လို့ လွယ် တာတွေကြောင့် ဇော်ဂျီ ကိုအများက လက်ခံထားတာပါ။ယူနီကုဒ် ဘယ်လောက်ဘဲကောင်းကောင်း လူငယ်တွေ အတွက် ကတော့ ဇော်ဂျီ က နံပါတ် ၁ ပါဘဲ။ ဘာဘဲပြောပြော ဇော်ဂျီကို အားလုံးသစ္စာ ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ဧရာ တို့ယူနီကုဒ်တို့ ပြောင်းမဲ့ လူတွေ ထဲ မှာကျနော် မပါတော့အသေချာပါဘဲ။ ဇော်ဂျီကိုတစ်ခု ပြောစရာရှိတာ က တိုင်းရင်းသားဘာသာတွေ ရိုက်တဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲ ရှိတာပါဘဲ ။အဲဒီကိစ္စ ကိုတော့ တစ်ခုခုကြံဆ သင့်ပါတယ်။ဘာဘဲပြောပြော မြန်မာစာဟာ လူ ၃၉ သန်းလောက်ရဲ့ မိခင်ဘာသာစကားပါ။ အဲဒါကြောင့်မြန်မာလို့လွယ်လွယ်ကူကူ ရိုက်လို့ ရ တယ်ဆိုတာနဲ့ တင် တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေနေပါပြီ။
ကဲ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် AYAR VS ZAWGYI ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ပြီး ဇော် ဂျီ စစ်တမ်းလေးတစ်ခုလောက်လုပ်သင့်ပါတယ်
အချိန် 11:36 PM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
Myanmar Bogger Survey 2009
ယခင်ဩဂုတ်လ တစ်လလုံး ကောက်ယူခဲ့သော Myanmar Blogger Survey မှာ လူပေါင်း ၂၄၀ သာ ရှိသေးကြောင်း၊ မြန်မာ့ဘလော့များ ထပ်မံရှိနေသေးပြီး ဖြည့်စွက်ပေးကြရန်အတွက် စက်တင်ဘာလ တစ်လကို ထပ်မံ ပိုက်ဆံပေးပြီး Myanmar Blogger Survey ကို Extend လုပ်ထားကြောင်း။
ဒီစစ်တမ်းကို ပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံတကာမှ မီဒီယာများလည်း စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြတဲ့အတွက် ပိုမိုတိကျတဲ့ Result ရဖို့ရာ မြန်မာဘလော့ လူငါးရာခန့် Myanmar Blogger Survey မှာ ပါဝင်ဖြည့်စွက်ဖို့ လိုအပ်နေကြောင်း ကိုညီလင်းဆက် ဆိုက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာ့ဘလော့ဂါ အပေါင်းတို့မှ ပါဝင်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် ကူညီပေးကြပါရန် မိမိမှ တစ်ဆင့် ထပ်မံ တိုက်တွန်းကြေညာအပ်ပါသည်။
အချိန် 12:02 AM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
ဒီအလုပ်ကြမ်းနဲ့ အကျယ်ချုပ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို CASH ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကနေ ကြားခဲ့ ရတာပါ။ တကယ်ကို မမှားပါဘူး။တိုင်းတပါးနိုင်ငံခြား ကို ရောက်နေကြတဲ့ ကျနော်တို့ တွေ ရဲ့ဘဝဟာ တကယ့်ကို အလုပ်ကြမ်းနဲ့ အကျပ်ချုပ် ကျခံနေရသလိုပါဘဲ။ ဟိုတုန်းက မြန်မာပြည်ထဲမှာနေတုန်းက ရုပ်ရှင်ထဲမှာသာမြင်ဘူး တဲ့နိုင်ငံခြား ကိုသွားချင်းတာအမှန်ပါဘဲ။ နိုင်ငံခြားပြန်တွေကြီးပွားကောင်းစား ပြီးပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်လာတာကို အံသြအားကျခဲ့ရတာ အမောပါတယ် ။ တကယ်တော့နိုင်ငံခြားဆိုတာ ထင်သလောက် ပျော်ဖို့ မကောင်းပါဘူး။ စားဝတ်နေရေးပြေပြေလည်လည် ရှိပေမယ့် တကယ်ကို မွှန်းကြပ်စရာကောင်းလှပါတယ် ။အရွယ်ရောက်တဲ့ လူတွေမှာတစ်ပတ် ကို ၅ ရက် အလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ တစ်ရက် ၈ နာရီ သွားတာလာတာနဲ့၁၀ နာရီလောက် အချိန်ပေးလိုက်ရတာပါဘဲ ။အလုပ်ပိတ်ရက်ကျတော့ ပင်ပန်းထားသမျှအတွက် အိမ်မှာနားနားနေနေ နေရတော့ဘယ်မှမသွားဖြစ်ကြပါဘူး ။တစ်နှစ်လုံးလုံး ဒီလို အချိန်ကုန်ကြရတာပါ။ကျောင်းသားတွေဆို လည်းဒီလိုပါဘဲ မနက် ၆ နာရီထ ၇ နာရီကျေင်းသွား ။ညနေ ၃ နာရီမှ ပြန်ရောက်ပြီး ။ခဏနားပြီး ပါသမျှအိမ်စာတွေ ကို သိမ်းကြုံး လုပ် မှ နောက်နေ့အတွက် အမှီပြီးတာပါ။ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ရောက်ပြန်တော့ Summer school ဆို ပြီးတတ်ရပြန်ပါတယ် ။ ဒီလို မှမဟုတ်ရင် တော့ CREDIT နည်းနည်းနဲ့ဘဲ အောင်မှာပါ။ Honor class တွေတောင်းလို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မဖြစ်မနေ တတ်ကိုတတ်ကြရမှာပါ။
ဒီမှာက ရေလိုက်ငါးလိုက် နေလို့ မရပါဘူး။တော်တော် များများက ကြိုးစာကြပါတယ်။ ကိုယ့်ပတ် ဝန်း ကျင် ၁၀၀ မိုင် ဝန်းကျင် က လွဲ ရင် သွားလို့ မရသလောက်ပါဘဲ။တကယ် ကို အကျခံနေရတဲ့ အကျယ်ချုပ်ပါဘဲ။ လူတွေ က အသက် ၆၅ နှစ်မပြည့်မချင်း အနားမရကြပါဘူး။ အသက်ပြည့်တဲ့ အခါမှတော့လူ က အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်နေလောက်ပါပြီ ။ စိတ်ညစ်ရပါတယ် ဗျာ။ ။။
အချိန် 9:07 PM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
ဒီနှစ် အတွက်ကျောင်းစဖွင့်တာ ၆ ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်။တွေ့ ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကတော့ တော်တော် မလှမပပါနဲ့။ ယဉ်ကျေးမှု မရှိတဲ့ လူရိုင်းတွေလို တောင်ဒီလိုလုပ်ကြလိမ့်မယ်လို မထင်မိဘူး။ ဖြစ်ပုံကတော့ဒီလို ပါ ။
ကျနော်တို့ ကျောင်း က သစ်ပင်တွေအများကြီး ရှိတာကြောင့် အရိပ်ရပြီးအေးမြလှပါတယ်။အဲဒါကြောင့် နေ့ လည် အားလပ်ချိန်ဆို ကျောင်းသားတော်တော်များများဟာ အပြင်မှာထွက်ပြီး စားကြသောက်ကြ ထိုင်ပြီးစကားပြောကြ နဲ့ တော်တော် လေးသာသာယာယာ ရှိပါတယ်။
ဒီလို နဲ့ ကျနော်တို့ လည်းသူငယ်ချင်းတွေစု ပြီး အရိပ်ကောင်း တဲ့အရိပ်ကောင်းတဲ့ အပင်အောက်စားကြသောက်ကြ ရင် အေးအေးဆေးဆေး ခဏလောက်စကားပြောနေကြတုန်း ဘေးနား ကို အတွဲတတွဲ ရောက်လာပါတယ်။နောက် ၅ မိနစ်လောက်နေတော့ ရိုးရိုးတန်းတန်း မဟုတ်ဘဲ ဟိုလိုဒီလို ဖြစ်လာကြပါတယ်။တမင်မကြည့်ပေမယ့် မြင်နေရတာပါ။ နောက်နေ့ ရောက်တွေ စားပြီးသောက်ပြီး ထိုင်ရင်း ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်မိတဲ့အခါ တကယ်ကိုမနည်းလှတဲ့ အတွဲတွေ ပါ။ ကိုယ့်အတွဲနဲ့ ကို အလုပ်တွေရှုပ်နေကြတယ် ။
ဒါကိုမြင်နေတဲ့ ဆရာမတွေကလည်း ဘာမှမပြောကြပါဘူး။ဟိုတုန်း ကကျနော်ကြားဘူးတာ ကတော့ ဆရာ၊ဆရာမ လုပ်တယ်ဆိုတာ နာသုံးနာနဲ့ ပါ။ စေတနာ ၊ ဝါသနာ ၊ အနစ်နာခံပြီး လုပ်ကြရတာပါ ။ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားအားလုံးကို ဆရာလို ရော မိဘလို ပါ ဆိုဆုံးမကြပါတယ်။ ဒီလို နေဖို့ မပြောနဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ယောကျာင်္းလေ အတူတူ ထိုင်နေကြရင်တောင် ပြောလို့ မဆုံးပါဘူး။ ဒီလိုဖြစ်နေကြတော့ ကျနော် တို့ ရဲ့အာရှသား မိန်းကလေးတွေ က မျက်နှာပူနေကြပါတယ် ။ ကျနော် တို့ သူငယ်ချင်း ၆ ယောက် ထဲမှာ မိန်းကလေး နှစ်ယောက်ပါ ပါတယ်။တရုပ်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ကိုရီးယားမိန်မလေးတစ်ယောက်ပါ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ မှာအရှေ့တိုင်း က ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ရှိနေကြပါသေးတယ်။
တကယ်တော့ အမေရိကန်တွေဟာ မဆိုးလှပါဘူး။ သူတို့ မှာမြန်မာပြည်မှလို အရက်သောက်ပြီး သောင်းကြမ်းတာတို့ ၊ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်ရန်ဖြစ် တာတို့ မရှိလောက်ရှားပါတယ်။ နောက်ပြီး ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို သေနတ်ကိုင်ပြီးသောင်းကြမ်းနေတဲ့ လူမိုက်တွေလည်းမရှိပါဘူး။ ရုပ်ရှင်ထဲကလို အိမ်ထောင်ရေးလည်းမရှုပ်ကြပါဘူး။လမ်းဖြတ်ကူရင် ကာရပ်ပေးတတ်ကြပါတယ် ။တစ်ချို့ နေရာတွေမှာမယဉ်ကျေးဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် သူတို့ကတကယ်ကိုယဉ်ကျေးကြပါတယ်။ ဒီလိုကျောင်းမှာ မြင်မကောင်းအောင်ဖြစ်နေကြတယ် ဆိုတာ ကတော့ ဆရာမတွေဘဲ အုပ်မှု ညံ့လို့ လား ၊ဘာလား ညာ လား .........လားပေါင်းများစွာနဲ့ စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးပါဘဲ
အချိန် 9:24 PM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
အိမ်မက်လိုလို ဖြစ်နေတဲ့ ဒို့ အရေးအော်သံ
နောက်တစ်လောင်းက မင်းဖြစ်မှာလားငါဖြစ်မှာလား။ ။
အချိန် 4:03 PM ရေးသားသူ Thet Ko Ko
….သင်သေသွားသော်.... ဪ...လူ့ပြည်လောက၊ လူ့ဘ၀ကား အိုရနာရ၊ သေရဦးမည် မှန်ပေသည်တည့် သို့တပြီးကား၊ သင်သေသွားသော် သင်ဖွားသောမြေ၊ သင်တို့မြေသည် အခြေတိုးမြင့်၊ ကျန်ကောင်းသင့်၏ သင်၏အမျိုးသား၊ စာစကားလည်း ကြီးပွားတိုးမြင့်၊ ကျန်ကောင်းသင့်၏ သင်ဦးချ၍ အမျှဝေရာ စေတီသာနှင့်၊ သစ္စာအရောင် ဥာဏ်တန်ဆောင်လည်း ပြောင်လျက်ဝင်းလျက် ကျန်စေသတည်း။ (ဆရာဇော်ဂျီ)
မီးလင်းနေရင် chat လို့ ရတယ်
ကျနော့် သူငယ်ချင်းအချို့ 
ဂီတ နဲ့ ဘဝ
musik is my religion
မြန်မာ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေး ရန်ပုံငွေ